देशभरको जग्गाको मूल्यांकन बढ्यो, अब कुन जग्गाको सरकारी मूल्य कति पर्छ? - Chandragiri News
Home नगरपालिका देशभरको जग्गाको मूल्यांकन बढ्यो, अब कुन जग्गाको सरकारी मूल्य कति पर्छ?
२०७६, १ श्रावण बुधबार १८:५५
चन्द्रगिरी नगरपालिका ३ लाखसम्म बढ्यो
यो नगरपालिकाले त्रिभुवन राजपथ छोएको दायाँबायाँ ३ लाख रुपैंया वृद्धि गरिएको छ।मालपोत कार्यालयका अनुसार पक्की र कच्ची सडकमा १ लाख ५० हजार वृद्धि गरिएको छ। वडा ११, १२, १४ नैकाप/सतुङगलमा ५० हजारदेखी ३ लाख सम्म वृद्धि गरिएको छ।
यस्तै वडा नं३,४ थानकोट क्षेत्रमा त्रिभुवन राजपथले छोएको दायाँबायाँ ३ लाख वृद्धि गरी प्रति आना १५ लाख बनाइएको छ। थानकोट कच्ची र बाटो नभएको ठाउँमा ५० हजार वृद्धि गरिएको छ। वडा २ वाडभन्ञ्याङ त्रिभुवन राजपथले छोएको जग्गा प्रतिआना २ लाख वृद्धि गरी १० लाख बनाइएको छ। यस्तै ध्याम्पेडोल वाडभञ्याङ सडकमा २ लाख ५० हजार वृद्धि गरी प्रति आना ६ लाख पुर्याइएको छ। यस्तै कच्ची/गोरेटो बाटोमा ५० हजार बढाइएको छ।
वडा नम्बर१३ र १ नैकाप पुरानो भञ्ज्याङ/दहचोकमा ५० देखी १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। वडा नं ८ मातातीर्थमा पक्की सडकमा १ लाख ५० हजार वृद्धि गरी प्रति आना ५ लाख बनाइएको छ। कच्ची सडकमा १ लाख र गोरेटोमा ५० हजार वृद्धि गरिएको छ। यस्तै वडा ९ मच्छेगाँउमा बाटो नभएको जग्गामा २५ हजार वृद्धि बाहेक अन्यमा यथावत राखिएको छ।
दक्षिणकाली नगरपालिकामा पनि बढ्यो
यो नगरपालिकाको चल्नाखेल दक्षिणकाली मूल सडकले छोएको, पक्की, कच्ची बाटोमा रहेको जग्गा आनाको ५० हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यस्तै छैमले क्षेत्रमा ५० देखी १ लाख सम्म जग्गाको मूल्यांकन वृद्धि गरिएको छ। नगरपालिकाको टल्कुडेचौर,फर्पिङ भिमसेनस्थान, सोखेल र शेषनारायण क्षेत्रमा ५० देखी १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
जग्गाको मूल्याङकन मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ५(ख)को उपनियम ४ बमोजिम जग्गासँग बाटो जोडिPको नजोडिएको र सोको प्रकार, जग्गा प्रयोजनको अवस्था, जग्गाको वस्तुगत अवस्थिती र चालू आर्थिक वर्षमा कारोबार भएको सोही क्षेत्रको खरिद विक्री मूल्यलाई आधार मानिन्छ।
Previous articleबाढी पिडितलाई सहयोग
Next articleनेपाल रेड क्रस सोसाइटी तथा चन्द्रागिरी उप-शाखाद्वारा बाढी पिडितलाई सहयोग